Ama-Auto Ac Compressors, ama-Car Ac Compressors, i-Truck Air Conditioner - iHollysen
IHOLLYSEN & KPRUI
IChangzhou Hollysen Technology Trading Co., Ltd. iyinsizakalo engaphansi kweChangzhou Kangpurui Automotive Air Conditioner Co., Ltd. Iyimboni yocwaningo nentuthuko yobungcweti, ukukhiqiza nokuthengisa izimoto ezisimamisa umoya nezipaka ama-air conditioners. Imboni yethu itholakala eNiutang Industrial Park, esifundeni saseWujin, eDolobheni laseChangzhou, esifundazweni saseJiangsu, iphakathi nendawo yeYangtze River Delta, eseduze kweShanghai-Nanjing Expressway neYanjiang Expressway, enokuhamba okulula nezindawo ezinhle.
Isipiliyoni seminyaka engu-15
Imikhiqizo engaphezu kuka-150
Isilawuli se-Auto Air Conditioning ne-Clutch For Suzuki Wagon R / Suzuki Jimny / Alto
ICANDELO ELISHA LE-AUTO AC compressor Umkhiqizo wethu unosayizi omncane kakhulu, umsindo osebenzayo ophansi, impilo yokusebenza ende, ukusebenza okuhle kokusebenza kahle kokupholisa. Isici esibaluleke kunazo zonke intengo enhle kakhulu uma iqhathaniswa. Singaqinisekisa ama-compressors, uzothenga enkampanini yethu hhayi umkhiqizo uqobo, kepha neplani yesondlo kanye nephrojekthi yesevisi yamasu. Yonke imihlahlandlela yokufaka kanye nencwadi yezinsizakalo izolandelwa ngama-compressors ethu. Uhlobo lwengxenye: A / C Compre ...
I-Auto Ac Compressor ne-Clutch Assembly Production Factory yeToyota Passo / Toyota Corolla / Toyota Terios
ICANDELO ELISHA LE-AUTO AC compressor Rotary vane compressor, eyaziwa nangokuthi i-scraper compressor, okuwuhlobo lwe-compressor ejikelezayo. Isilinda se-rotary vane compressor sinezinhlobo ezimbili: eyindilinga ne-oval. Ku-compressor ene-rotary enesilinda esiyindilinga, ibanga elingaphakathi nendawo le-eksisi eyinhloko ye-Rotor kanye nendawo yesilinda yenza i-Rotor isondele esikhaleni somoya nasendaweni engaphandle yesilinda. Ku-compressor ene-rotary ene-cylinder oval, i-axis eyinhloko ye ...
Ac Compressor Manufacture Factory YeMazda CX3 / Mazda Demio / Mazda 3
Ngaphandle kwamayunithi amakhulu ezimele ezimoto ezimisa umoya opholile, ama-compressors ajwayelekile wemoto axhunywe nge-shaft enkulu yenjini ngokusebenzisa imishini yokubamba kagesi. Ukuma nokuqala kwe-compressor kunqunywa ngokudonsa nokudedelwa kwe-clutch kagesi. Ngakho-ke, i-clutch ye-electromagnetic iyingxenye yesistimu yokulawula okuzenzakalelayo yemoto yokupholisa umoya. Ithintwa yiswishi lokushisa (i-thermostat), i-pres ...
Isicindezeli se-Auto Ac se-Honda N-BOX / Honda Brio / Honda Jazz
IBANDLA ELISHA LE-AUTO AC COMPRESSOR Isilawuli sokupholisa umoya ezimotweni “yinhliziyo” yohlelo lokupholisa umoya lwezimoto. Lapho uhlelo lokupholisa umoya lwemoto luvuliwe, icompressor iyaqala ukusebenza, icindezele futhi iqhube isiqandisi ngohlelo lokuvala umoya oluvaliwe. Isifriji simunca ukushisa emotweni ngokushintshanisa ukushisa ku-evaporator, bese sisabalalisa ukushisa kuye ngaphandle kwemoto nge-condenser, ukuze kunciphise i-tempera ...
I-Universal Truck Sleepe ...
I-PRODUCT PARAMETERS Ingxenye Yokupaka ...
Okusha Window Air Cond ...
Ukupaka umoya opholisayo, ama-trucks asekelayo, i-truc ...
12v 24v ephathekayo Unive ...
Amapharamitha womkhiqizo Ingxenye Yokupaka ...